【INDLELA ENGAKAZE IYAPHIWE KAKHULU】Umpompi wegumbi lokugezela oyisiliva osesibukweni esifana ne-chrome nokuma okuyingqayizivele kwe-US okunelungelo lobunikazi okuphindwe kathathu, kwenza indlu yakho yokugezela ibe sezingeni eliphezulu kakhulu.
【I-SOLID BRASS MATERIAL】Yenziwe ngekhwalithi ephezulu ye-Solid Brass, umpompi oyize wegumbi lokugezela unesisindo esingu-5.14 Ibs futhi uvikela ngempumelelo ukugqwala nokugqwala. Ivelu ye-ceramic engenamthofu ivaleka ngokuqinile ukuze kuqinisekiswe ukusetshenziswa kwesikhathi eside ngaphandle kokuconsa noma ukuvuza.
【IZINTO EZIHLANGANISIWE】I-Pop-up Drain ehambisanayo ye-chrome, ipuleti ledekhi elingu-4-intshi (lokufaka imbobo engu-1 noma emi-3) kanye namapayipi amanzi we-tucai angu-2 x 0.5m kusiqinisekiso sekhwalithi afakiwe! Imbozwe yizinsuku ezingu-90 zokubuyisela mahhala kanye newaranti yeminyaka emi-5.
【KULULA UKUSEBENZA】Impompi yesibambo esisodwa yokugezela kulula ukulawula izinga lokushisa lamanzi nokugeleza kwamanzi. I-spout ye-arc ephezulu ishiya indawo eyanele yanoma yimiphi imisebenzi. Zonke izesekeli zokufaka neziyalezo zinikeziwe, kulula ukuzifaka wedwa ngaphandle komshini osebenza ngamapulangwe!
【UMSAKAZI OZINnzile, AKUKHO UKUCHAPHAZEKA】I-Neoperl Aerator esebenza kahle inikezela ngokugeleza kwamanzi okukhudlwana nokushelelayo futhi yonga ngaphezu kuka-50% ekusetshenzisweni kwamanzi. Isuse kalula i-aerator ukuze ihlanzwe ngethuluzi elifakiwe, elikunikeza ulwazi olungcono kakhulu lomsebenzisi.